Abavelisi beemveliso ze-Eco abavelisi - China iiQhina leemveliso zobuhlobo zeFektri kunye nabaxhasi
Isitya sokutya esinokuboliswa ziintsholongwane
I-COPAK yaseShanghai yasekwa ngo-2010. Kwaye iimveliso zethu eziphambili ziikomityi zePET, iibhotile zePET kunye nezitya zokutya zePET. Ngaphandle koko siye savelisa iimveliso zePLA. Kodwa ngoku iintsuku, iimveliso ezinobungane ze-Eco ziyafuneka kakhulu ukukhusela okusingqongileyo. Keisitya sokutya esinokuboliswa ziintsholongwane zibonelelwa sithi. Izitya zamaphepha okwakhiwa, izitya zokutya ezinokuboliswa ziintsholongwane ezenziwe kwiswekile okanye istatshi sombona njalo njalo.
Imveliso yamagama aphambili Iphepha lesaladi lesitya; isitya sephepha lesilwayo; Isitya sephepha lesaladi; Isaladi yekraft isitya sephepha
Uphawu Ukwaleka kwe PE; Ukwaleka kwePLA; Isitya sephepha seAluminiyam
Iyashicilela Matt Lamination / embossing / Lamination ecwebezelayo / ngefoyile yegolide
Ixesha lokuzisa 15-25kwiintsuku
Ukupakisha iimpahla 50pcs / ingxowa, 10bag / baseKapa
Ukuhambisa iZibuko Shanghai, Ningbo
Ixesha lokuhlawula I-30% T / T kwangaphambili, ibhalansi ngokuchasene nekopi ye-BL.
Izitya iphepha Custom
Izitya iphepha Custom zenziwe ngephepha kunye ne-PE / PLA / i-aluminium yokwaleka. Izitya zephepha likaCopak zinokwenziwa ngokobungakanani obahlukeneyo, imiqulu, iimilo, imibala kunye noshicilelo lwe logo. Izitya iphepha Custom ziyilelwe ukupakisha Rice, noodles, Fruits Dessert, iyogathi, Frozen, Inxalenye, isepha eshushu, izitya ezishushu njalo njalo.
Inkxaso yeCOPAK Iikomityi zePLA zesiko eziprintiweyoAbathengi banako ukwenza ikomityi yabo kwiimilo, imibala, imiqulu, ilogo eprintiweyo kunye nezinye iinkcukacha. COPAK baye iinjineli abanamava, oomatshini ngumngundo ekuphuhliseni, abasebenzi abanezakhono kunye UV-screen umatshini yoshicilelo. Zonke iimfuno zakho zinokwaneliseka kwiCOPAK.
Indawo yesitya sephepha. Ikwabizwa ngokuba sisitya sephepha esilahlayo, isitya sephepha okanye isitya sokutya esinokuboliswa ziintsholongwane senziwe ephepheni kunye ne-PLA / PE yeplastiki kunye ne-aluminium yokutyabeka. Ngokwesiqhelo yenzelwe imilo engqukuva kunye neeCOPAK's okwakhiwa iphepha isitya Zilungele isuphu, isityu, ipasta, iisaladi, iisiriyeli ezibilisiweyo kunye ne-ayisi khrim, amandongomane, iziqhamo ezomisiweyo kunye nezinye iimveliso. Umkhenkce onganyangekiyo kwaye ungakhubazeki. Kuyenzeka ukuba ufake uphawu olunophawu.
Isitya sephepha ezineziciko
Iibhotile zamaphepha ezinokuxinana ezineziciko - 100% ezinokuboliswa ziintsholongwane. Izitya zamaphepha eShanghai COPAK zizikhethele ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Izitya zethu zephepha zenziwe ngephepha laseKraft okanye iphepha elimhlophe. Zombini zinokufakwa i-PE / PLA / iAluminiyam yokutyabeka. Ebhekisa kwiziciko, ungakhetha isiciko sephepha, isiciko sep, isiciko seOPS okanye isiciko sePET.
Ngaphandle kweekomityi zesiselo se-PET, izikhongozeli zokutya kunye neebhotile zejusi zePET, iCOPAK ikwayingcali kwiCompostable IPLA iibhotile. Singayila, sivelise iimveliso ezintsha, imveliso eqhelekileyo kunye norhwebo lwamanye amazweIibhotile zePLA ngamava obuchule. Imveliso yethu iqala ngokuseta uyilo lwemveliso, ukwenza ukungunda, ukubumba ukubetha, ukubumba ngenaliti, ukushicilela, ukuqhubekeka iilebheli kunye nokupakisha kunye nokuthunyelwa. Iminqwazi yePLA yeIibhotile zePLA zikwanokhetho ezahlukeneyo.
Umzi mveliso weShanghai COPAK Co, Ltd ibonelela ngomgangatho wepremiyamu enokutsha UmzA Ibhotile e China. Iibhola zeplastiki zethu zeCompos-itheyibhile yeplastiki ithandwa kakhulu phakathi kwabangenisi kunye nabasasazi kwihlabathi liphela. Ifunyanwa eTshayina kwaye isebenza ngokukodwa kwimveliso kunye nokuthumela ngaphandle iibhotile ze-PLA, iCOPAK inokuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokubonelela ngenkonzo yokurhweba yamanye amazwe. Singabona bathengisi babalaseleyo Ibhotile yePLA etshayina.
Kwi-COPAK, izitya zethu zephepha zinokhetho oluninzi ngobungakanani, imiqulu kunye nokusetyenziswa. Ziyakwazi ukusasazeka ngemichiza, ubungqina bokuvuza kunye nokunganyangeki ngegrisi. COPAK’Iibhotile zephepha zinepeyinti enye ye-PE, ukutyabeka kabini kwe-PE, ukutyabeka kwe-PLA ngombala omhlophe, umbala we-Kraft, isitya sephepha se-aluminium kunye nezitya zamaphepha odonga.
Ezi zitya zamaphepha zilungele isaladi, isuphu, imifuno, iziqhamo kunye nezinye iintlobo zokutya zilungele ukupakisha zonke iintlobo zokutya ezishushu okanye ezibandayo. Iinkcukacha zesitya sesaladi sephepha kunyeisitya sephepha lesuphu zezi zilandelayo,
Shanghai COPAK Industry Co., LTD, eyasekwa ngo-2010, kunye ofisi yokuthengisa e Shanghai kunye mveliso e Zhejiang. I-COPAK yasekwa okokuqala njengomthengisi weengxowa zeplastiki kunye nefilimu yokupakisha ukutya. Ngo-2015, saqala ishishini kweekomityi PET neebhotile PET. Kule mihla, iimveliso eziluhlaza zifumana ingqalelo yabantu. ICopak isebenzise ngakumbi izinto ezinobungqina bendalo, njenge-RPET kunye nePLA. Ngoku iCOPAK nazoUmenzi weebhotile zePLA kunye nendebe yePLA.
I-Shanghai COPAK Industry CO., LTD eseShanghai, China, yinkampani yobungcali yeephakeji zokutya ezinje ngeekomityi zesiselo, iibhotile zejusi, izitya zokutya, izikhongozeli zesaladi zePET kunye nePLA.
Ukubhekisa kwiimveliso ze-PLA ze-COPAK zenziwe nge-sugar sugar bagasse, cornstarch. Iimveliso zethu zePLA zibandakanyaIikomityi zePLA, Izikhongozeli zokutya zePLA, iibhotile zePLA. Zisetyenziswa kakhulu kwivenkile enkulu, ivenkile ekhawulezayo yokuthenga izinto, imivalo, iivenkile zejusi njalo njalo xa upakisha iziselo ezibandayo ezinje ngeziyobisi, ijusi, ismoothies, ubisi, iti, ikofu, ice cream njalonjalo.